Kaonty hosoka facebook Nofonjaina ilay mpandrahona nitaky 4 tapitrisa ariary
Naiditra am-ponja vonjimaika mandra-pitsara azy ny mpanao telefaonina avy any Toamasina naka ny sary mamoafady ana vehivavy iray. Norahonany ity farany handoa vola ho tambin’ny tsy
fanapariahany izany. Nanangana kaonty hosoka tamina tambajotran-tserasera ilay rangahy ka nadrahona ny hanaparitaka ireo sary manokan’ilay ramatoa raha tsy manome vola hatramin’ny 4 tapitrisa ariary. Nitory avy hatrany ilay nanana finday simba izay vao
avy novidiana tsy ela ka saika hamboarina. Nanatanteraka ny vela-pandrika ny mpitandro filaminana ka tafiditra tao anaty haraton’ny polisim-pirenena ity voarohirohy raha tsy nahazo io lelavola, ny 7 jona teo. Niaiky ny helony izy nandritra ny famotorana azy izay notanterahin’ny mpitandro filaminana. Taorian’ny fampanoavana,
efa miandry ny fitsarana azy any am-ponja izy.
Taona maro hifonjana sy vola an-tapitrisany maro no lamandy miandry ny solafaka amin’ny “cybercriminalité” toy izao, indrindra ny tenany efa nilaza ny polisy mpanao famotorana fa nanao ny asa ratsy.